မေ 2018 » Page2of7» ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
Month: မေ ၂၀၁၈
မေ ၃၀၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် နိုင်ငံတော်သြ၀ါဒါစရိယ၊ မန္တလေးမြို့၊ မဟာဝိဇိတာရုံကျောင်းတိုက်ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ဘဒ္ဒန္တ၀ိစာရိန္ဒာဘိဝံသအား သွားရောက်ဖူးမြော် ကြည်ညို
နေပြည်တော် မေ ၃၀ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သည် နိုင်ငံတော်သြ၀ါဒါစရိယ၊ မန္တလေးမြို့၊ မဟာဝိဇိတာရုံကျောင်းတိုက်ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ဘဒ္ဒန္တ၀ိစာရိန္ဒာဘိဝံသ အား သွားရောက်ဖူးမြော် ကြည်ညို၍ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအားမေးမြန်းလျှောက်ထားပြီး လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ နှင့် အားဖြည့်ငှက်သိုက်ရည်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ (Unicode Version) နပွေညျတျော
နေပြည်တော် မေ ၃၀ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် မန္တလေးအထွေထွေရောဂါ ကုဆေး ရုံကြီး၊ နှလုံးအထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်၌ ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ ကျောင်းတိုက်၊ ရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌ မဟာနာယက၊ တွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင် မတ္တရာသူဋ္ဌေးကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တမာနိတသီရိ ဘိဝံသ အားသွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို၍
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကစာချစာသင် သံဃာတော်များအား တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများက လှူဖွယ်ပစ္စည်းများနှင့် စာအောင်ဆု(ထာဝရ) ငွေပဒေသာပင်များပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ မေ ၃၀ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်နာယကစာချစာသင် သံဃာတော်များအား တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစုများက လှူဖွယ်ပစ္စည်းများနှင့် စာအောင်ဆု(ထာဝရ) ငွေပဒေသာပင်များပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Unicode Version) နပွေညျတျော၊ မေ ၃၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ မေ ၂၈ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာ တော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei AL-Emadi အား ယနေနေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌
နေပြည်တော်၊ မေ ၂၈ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei AL- Emadi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ